FAHASALAMANA : Azo tsaboina ao amin’ny PeZaGa Androva ny homamiadan’ny nono
Nomarihana tao Mahajanga ny iray volan’ny “oktobre rose” ka nahatratra 204 ireo vehivavy tonga nanao fitiliana io homamiadan’ny nono sy fitsirihana ny vozon’ny tranon-jaza teny aminy hopitaly Candide Vim Antanimasaja tamin’iny volana oktobra lasa teo iny. 14 novembre 2017
Ny fondation Akbaraly izay tantanin’i dokotera Horace Marie Candide no tompon’antoka tamin’izao hetsika efa fanao isan-taona izao, ka ny Kb 8ém sy ny vokovoko mena malagasy no niara-nitoto sy nahandro nahamasaka ny fahalavorarian’izany.
Oktobre rose no nisalorana ny hetsika izay nanomezan-doko ny fitiliana ity homamiadan’ny nono ity, izay tena nahasarika ireo renim-pianakaviana maro tokoa, satria dia niisa 106 izy ireo no tonga teny amin’ny hopitaly Candide nitily ity aretina ity tao anatin’ny roa andro voalohany. Nisy ireo nahitana soritr’aretina homamiadana tamin’ireto vehivavy ireto, saingy tsy maintsy mbola hohamarinina tsara any Antananarivo io valin’ny fitiliana io, hoy hatrany ny filohan’ny fondation Akbaraly. Aorian’izay dia horaisina an-tanana ny fitsaboana azy ka ao amin’ny hopitaly PeZaGa Androva no handraisana io fitsaboana io ka hanao tolo-tanana amin’izany ny fikambanan Akbaraly, hoy ny filoha.
Ny distrikan’i Marovoay no nandray ny fankalazana ny oktobre rose tamin’iny taon-dasa iny, raha ny teto Mahajanga kosa no nanatanerahana izany tamin’ity taona ity. Ny fitiliana maimaimpoana io homamiadan’ny nono io no hetsika efa fanao isan-taona nentina nanamarihana izany hoantsika teto Mahajanga, raha eran-tany dia samy mankalaza io oktobre rose io avokoa. Tsy mifarana hatreo anefa ny ady atao amin’ity homamiadan’ny nono sy fitiliana ny vozon’ny tranon-jaza ity na dia efa tapitra aza ny volana oktobra, hoy i dokotera Candide, izay mbola nanentana ny vehivavy rehetra mba hamantatra ny toe-pahasalamany hahafahana mitsabo ny aretina raha toa ka sendra izany.
Ny tolakandron’ny zoma 10 novambra teo àry no nanaovana fisarihana ilay karatra nozaraina tamin’ireo vehivavy nanao ny fitiliana ka nanomezana fahatsiarovana dia ireo kojakoja an-dakozia no azon’izay tsara vintana tamin’izany raha samy nozaraina fahatsiarovana sahaza ho azy kosa ireo tonga tao amin’ny tokontanin’ny vokovoko mena tetsy Mangarivotra.
2020-09-28 14:54:53 par washington dc cbd
TUPE9R pretty practical material, overall I feel this is well worth a bookmark, thanks